BUYAAS About Us - Anabolics Steroids vatori
Luohe Hengfei Biological Technology Co., Ltd., inowanikwa mu2008, inzvimbo yepamusoro yezvigadzirwa zvemishonga inoshandiswa pakugadzira michina, R & D uye kutengesa. Inotora muLuohe Chemical Industry Park, yakagadzirirwa ku tsvakurudzo uye kubudirira kwekambani yepamishonga yemishonga, kugovera michina mitsva uye yepamusoro-soro mabasa emishonga yemishonga.
Hengfei Biotechnology ine nhare yakasimba ye biotechnology, kemikirini yekombiki uye kuongororwa kwekuongorora, kuisa pfungwa pakuvandudzika kweAAPIs, pakati pepakati nemakemikari akanaka, pavanopa hupamhi hweRO, maCMO uye maitiro ekuongorora kuongororwa uye hutsva hwekutsvakurudza kwekambani kumakambani mumabhizimisi ezvinyorwa.
Hengfei Biotechnology ine boka rine ruzivo rwekutonga uye boka rekutanga rekirasi reR & D, kusanganisira nyanzvi dzakawanda dzakakosha mumasango emishonga inoshandiswa pakugadzirwa nekutsvakurudza kwehutano hwehutano. Inonyatsozivikanwa uye inokwikwidzana inokosha mune idzi mishonga yemishonga yemakemikari, inyanzvi yekugadzirwa kwezvinhu, kushandiswa kwezvinodhaka kwezvinodhaka, kugoverwa kwezvinhu, nekudaro. Vatengi vekambani nevashandi vanobva munyika yose, vachiumba ukama hwepedyo nemakambani akawanda emishonga muNorth America, Europe, India uye China.
Kuomerera pamusoro we "Quality Basis, Customer Customer, Honest Service, Mutual Benefit", Hengfei Biotechnology Co., Ltd. inopa vatengi nemiti inogutsa kuburikidza nekuongororwa kwakakwana uye basa rakanaka.
Mwoyo wose tarisira kubatana newe uye kubudirira mune ramangwana win2win!
CEO, Muvambi wesangano
Mako. Z. C
high-tech pharmaceutical biochemical business for integrating production, R & D and sales.
CRO, CMO mabasa
pamwe nechikwata chakasimba che biotechnology, chemakemikari yekombiki uye kuongororwa kuongororwa, kuisa pfungwa pakuvandudzika kweAAPIs, pakati nepakati pemakemikari akanaka, pavanopa hupamhi hwepamusoro reRC, maOOO services uye kuongorora kuongororwa uye hutsva hwekutsvakurudza hwemakambani mumakambani ezvinyorwa.
Isu tine ma-laboratory anonyanya kushandiswa uye zvishandiso, guru reR & D team rose uye vatariri vehurumende.
ISO9001: 2000 uye GMP Certification.
Bhalisa kuti uwane ruzivo rwezvino pamusoro pekliniki yedu.
Iwe uchagamuchira zvinhu zvekupedzisira nemabhonasi.